भक्तपुरको एक होटलमा बिल धेरै उठाएको भन्दै होटलमै ग्राहकले बमजस्तो वस्तु राखिदिए ! – Taja Khawar
भक्तपुरको एक होटलमा बिल धेरै उठाएको भन्दै होटलमै ग्राहकले बमजस्तो वस्तु राखिदिए !
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ०६, २०७८ समय: १२:२५:५१
भक्तपुरमा आफू`लाई विल उठाएको भन्दै एक यु`वकले रेष्टुरेन्टमै बम जस्तो अकृतिको वस्तु राखेर हिडेको खुले`को छ ।
भक्तपुर`स्थित ठिमीको दिव्यश्वरी गेस्ट हाउस एण्ड रेष्टु`रेन्टमा ती ग्राहकले आफूलाई विल तिराएको भन्दै ब`म जस्तै आकृति`को वस्तु राखेर हिडेको प्रहरी अनुश`न्धानबाट खुलेको हो ।
भक्तपुर प्रहरीका अनुसार शनिबार राति ब`म जस्तो वस्तु रेष्टुरेन्टकै प्राङ्गणमा भेटिए`पछि संचालले खबर गरेका थिए । प्रहरीले पनि शं`कास्पद वस्तु नै हो भन्ने ठानेर शनि`बार राति झण्डै ११ बजेतिर नेपाली सेनालाई खबर गरिएको थियो ।
त्यसपछि नेपाली सेना`को टोलीले उक्त ब|म जस्तो देखिने वस्तु डि`स्पोज गरेको थियो । डिस्पोज पछि हेर्दा प्रेसर कुकरलाई बमको स्वरुपमा पाईएपछि सबै चकित बनेका थिए । तर उक्त वस्तु कस्ले राखेको भन्ने खुलेन ।
त्यसपछि प्रहरीले अनु`सन्धान गर्दा सोही रेष्टुरेन्टमा केहीदिन बसेर गएका युवकलाई शंका शंका गर्यो। उनले होटल संचालकसँग झग`डा गरेको पनि खुल्यो । उनी थिए, काभ्रे|का रवीन तामाङ । त्यसपछि उनलाई सोध`पुछ गर्दा उनले प्रह`रीसामु आफूले नै त्यो ब`म जस्तो बनाएर कुकर राखेको स्वीकारेको प्रह`रीको भनाइ छ ।
उनले आफूले माद`क पदार्थ पीएको बेला रेष्टुरेन्ट संचालकसँग झग|डा गरेको र तर्साउन ब|म जस्तो देखिने वस्तु राखिदिएको प्रह|रीसामु बताएको बताइएको छ । उनलाई पक्रा`उ गरि थप अनु`सन्धान जारी राखेको भक्तपुर प्र`हरीले जनाएको छ । – न्युज२४नेपाल
Last Updated on: August 22nd, 2021 at 12:25 pm